Version 0.9.7.2 – Shortcodes gaabin
July 29, 2015 by dalabyo Leave a Comment
Tareenka sii daayo ayaa ugu dambeyntii soo gaaray xawaaraha qaar ka mid ah, sidaas darteed waxaan ku faraxsanahay in aan soo bandhigayno version cusub.
Version Tani waxa ay mar wuxuu diyaariyaa wakiil Google, waxan aay ka dhacayaan sababtoo ah waxaa jira waxyaabo aan run ahaantii ma xakamayn karo. Laakiin mar kale, u shaqayso.
Isbedelka kale waa qaar ka mid ah la rajeenayo in shortcodes, waxaad ka akhrisan kartaa dukumiintiyada badan ka horumarsan link soo socda:
Taageero Shortcode in Transposh WordPress plugin
Isbedelada ugu weyn waxaa ka mid ah oo dheeraad ah [tpe] shortcode oo lagu daray dusheeda ka weyn ah .
Code waxaa loo isticmaalaa codes lifaqaya is, halkaas oo muhiim ma aha in ay xirto tag ah, taasi waa sababta oo ah digtoonyey ah ee WordPress oo sababa
xeerka input transformation in Gowracay tagaan marka la isku daro shortcodes is-xiran iyo xiritaanka.
Sidoo kale, looma baahna in la qeexo ="y" mar dambe, sidaas oo kalena haatan [tpe mylang] si fudud u shaqeeyaan iyo wax soo saarka doonaa: so
Waxana aanu kugu adkaynaynaa in ay casriyayso, oo wuxuu ku raaxaysan this version cusub.
Version 0.9.7.1 – Waxaan leenahay site cusub
July 22, 2015 by dalabyo Leave a Comment
Wax First hore, waxaan jeclaan lahaa in aan si qoto dheer uga mahad Christopher ka LPK Studio – http://lpkstudio.com/ for design cusub ee website-kayaga, website cusub oo ugu dambeyntii ilaa heerka web cusub ee maanta iyo waa in laga arki qalabka aad mobile.
Waxaan la shaqeynta Christopher on this runtii riyaaqay, iyo inuu ahaa mid aad u hufan, ka jawaabaan wuuna ogaaday wixii aannu u baahnayn xitaa ka hor inta aan la weydiiyay 🙂
Website cusub ayaa ku weheliyay sii daayo cusub, waxba waaweyn ee halkan laakiin cayayaanka yar ayaa maray jidkii Doodoo oo ah.
Mar Waxaad isticmaali kartaa + Astaanta gudaha turjumaadaha
In jeer qaar ka mid ah, faqradaha dheer aan helin turjumaad sax ah si toos ah uga soo Google
Ku baahay turjumaadaha jir dhab ah uma shaqeeyo 0.9.7.0
Enjoy version cusub, iyo in la hubiyo in aad kor inay version miidhan, ay lacag la'aan ah.